FBS 10 သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူကို ကြိုဆိုပါတယ်!
ကျွန်တော်တို့ ကံထူးရှင် 10 သန်းမြောက်ရောင်းဝယ်သူအတွက် လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးပြီး - လျှို့ဝှက်အံ့သြဖွယ်ကို ဖော်ထုတ်ရအောင်!
ကံထူးရှင်ကတော့... အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျာကာတာမှ Yak Kheng ပဲဖြစ်ပါတယ်!
ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပါ။ 10 သန်းသောရောင်းဝယ်သူများ အမှတ်အသားဟာ ကျွန်တေ်ာတို့ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ခိုင်မာတဲ့ သက်သေပါပဲ။ FBSဟာ ၎င်း၏ အရောင်းအဝယ်မိသားစုအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူလျှက်ရှိပါတယ်!
ဒီလောက်ထိ ရောက်လာခဲ့တာ ယုံဖို့ခက်ခဲလှပါတယ်: Forex စိတ်အားထက်သန်သူများအဖွဲ့လေးကနေ ဈေးကွက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အကျိုးဆောင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ၊9သန်းသောရောင်းဝယ်သူများကို အောင်ပွဲခံခဲ့တာ မနေ့တစ်နေ့ကလိုပဲ၊ ပြီးတော့ ခုဆို ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ - နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုမှတ်သားရန် ရောက်လာပြန်ပါပြီ!
ခုဆို၊ ပျော်နေတဲ့ ကံထူးရှင်ဟာ ဆုကိုရွေးချယ်နေချိန်မှာ၊ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ အံ့အားသင့်စရာအတွက် အချိန်ပါပဲ။ 10 သန်းသောရောင်းဝယ်သူများဆိုတာ အလွန်အထင်ကရ ရတုသဘင်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းဝယ်သူများအားလုံးအတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ FBS င်္တီရှပ်၊ မတ်ခွက် (သို့) iPhone X တောင်မှကံထူးရန် အခွင့်အရေးရယူပါ!
စည်းကမ်းချက်တွေကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ: Facebook နဲ့ Instagramမှာ FBS ကို follow လုပ်ထားပြီး၊ ပြိုင်ပွဲပို့စ်ကို #FBS10MLNTRADERS ဟက်ရှက်ဖြင့်မျှဝေကာ ကံထူးရှင်ကြေညာရန် စောင့်ဆိုင်းပါ! FBS တရားဝင်စာမျက်နှာများမှာ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၉တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများသည် သမ္မတများနေ့ကို ကျင်းပကြသည်။ မူလက လူအများသည် ဂျော့ရ်ှဝါရှင်တန်၏ အမွေအနှစ်ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပြီး၊ ယခုအခါ သူတို့သည် အမေရိကန်သမ္မတများအားလုံးကို အရိုအသေပြုကြပါသည်။ သို့သော်၊ ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းသည် နိုင်ငံရေးအားလပ်ရပ်လောက် မဟုတ်တော့ဘဲ၊ အလုပ်နှင့် ဆိုင်ကိုကျော်သွားရန် အပိုအခွင့်အရေးတစ်ခုသာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၀နှစ်တာ ခရီး: FBSအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးပါ!
FBSသည် သင့်ဘေးတွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ - ၁၀နှစ်တာ မှတ်တိုင်ကြီးအတွက် ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါ!
အလုပ်သမားနှင့် သူ၏ဇနီးသည် စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာပြီပြိုင်ပွဲတွင် အဝတ်လျှော်စက်ရခဲ့သည်
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈တွင် အင်ဒိုနီးရှား၊ Cilegonမှ အလုပ်သမားနှင့် လူသစ်ရောင်းဝယ်သူ Depi Sandi၏ ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။
ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် မိုက်ခရို အကောင့် ပုံမှန်(စံ) အကောင့် ECN သုည spread ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် MT5 ပုံမှန်(စံ) အကောင့် MT5 Trade 100 အကျိုးတူလုပ်ငန်း